သင်၏ YouTube ဗီဒီယိုများတွင် ကြည့်ရှုသူများကို မှတ်ချက်ပေးရန် ထိပ်တန်းနည်းလမ်း5ခု - YTpals
YouTube အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများသည် ၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းနှင့် ၎င်းတို့၏ YouTube အဆင့်များကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ SEO မဟာဗျူဟာတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ဗီဒီယိုများကို အဆင့်သတ်မှတ်နေစဉ်တွင်၊ YouTube algorithm သည် ကြည့်ရှုသူ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ အော်ဂဲနစ်ကြည့်ရှုသူ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ သဘောသဘာဝကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သင်လိုအပ်သော အရေးကြီးသော အညွှန်းကိန်းအချို့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ - အခမဲ့ YouTube ကြည့်ရှုမှုများ၊ အခမဲ့ YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ၊ အခမဲ့ YouTube မျှဝေမှုများ၊ အခမဲ့ YouTube စောင့်ကြည့်ရသောအချိန်နှင့် အခမဲ့ YouTube မှတ်ချက်များ။
ချန်နယ်အသစ်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် YouTube တွင် ချက်ချင်းနှိပ်ရန် ခက်ခဲသည်။ သင့်ပရိသတ်ကို သင်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် နောက်ထပ်နည်းလမ်းများစွာရှိသောကြောင့် သင်လက်လျှော့ရန်မလိုအပ်ဟု မဆိုလိုပါ။
အဖိုးတန်ကြည့်ရှုသူများ တုံ့ပြန်ချက်ပေးသည့်အပြင်၊ သင့်ဗီဒီယိုများရှိ မှတ်ချက်များသည် ဗီဒီယိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် မှတ်ချက်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် သင့်လက်လှမ်းမီမှုကို ကျယ်ပြန့်လာစေရန်အတွက် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ YouTube ဖန်တီးသူများသည် မကြာခဏ အံ့သြစရာမရှိပါ။ YouTube မှတ်ချက်များကိုဝယ်ယူပါ! သင့် YouTube ဗီဒီယိုများတွင် ပိုမိုသဘာဝကျသော မှတ်ချက်များရရှိစေရန် ဗျူဟာအချို့ကို ကြည့်ကြပါစို့။
မှတ်ချက်များကို ပြန်ကြားခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်း။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုများကို မှတ်ချက်ပေးကာ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကို ဦးဆောင်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုသူများနှင့် ထိတွေ့ပါ။ သင့်ဗီဒီယိုများရှိ မှတ်ချက်များကို ချက်ခြင်းတုံ့ပြန်ကြောင်း သေချာပါစေ။ သင့်ကြည့်ရှုသူများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းသည် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပြီး သင့်ချန်နယ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ယာဉ်အသွားအလာ ပိုမိုမောင်းနှင်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကြီးမားသောမှတ်ချက်များအတွက်၊ တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ကြားခြင်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျင်းလာပြီး ခက်ခဲလာနိုင်သည်။ Smart Reply နှင့် Canned Response ရွေးချယ်မှုများဖြင့် ကိရိယာများကို အသုံးပြုရန် သင်စဉ်းစားနိုင်သည်။
အကြံပြုချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကို ဖိတ်ကြားခြင်း။
သင့်ဗီဒီယိုများကို မေးခွန်းများဖြင့် အဆုံးသတ်ပြီး ကြည့်ရှုသူများ၏ မှတ်ချက်များကို ဖိတ်ခေါ်ပါ။ သင့်ကြည့်ရှုသူများကို အကြံပြုချက်တောင်းခံနိုင်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သော တုံ့ပြန်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကြိုးစားနိုင်သည်။ ကြည့်ရှုသူ အကြံပြုချက်များကို စောင့်ကြည့်ပြီး အကြံပြုချက်များကို တတ်နိုင်သမျှ များများအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ လူကြိုက်အများဆုံး တောင်းဆိုမှုများကို ရွေးပြီး သင့်ကြည့်ရှုသူများ၏ နှစ်သက်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် အနာဂတ်ဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးပါ။
အမေးအဖြေကဏ္ဍများနှင့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ကျင်းပခြင်း။
အလွတ်သဘောမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ (အမေးအဖြေ) အစည်းအဝေးများကို ကြေညာပြီး ကြည့်ရှုသူများကို ၎င်းတို့တွင်ရှိသည့် မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် မေးခွန်းများမေးရန် အားပေးပါ။ ဤမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန်အတွက် သီးခြားဗီဒီယိုများ ရှိသင့်သည်။ ကြည့်ရှုသူမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် ဆက်ရှင်များသည် ကြည့်ရှုသူများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်စေသည့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများကို သင့်ဗီဒီယိုများတွင် မှတ်ချက်ပေးနိုင်ရန် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ကြေငြာရန် စဉ်းစားပါ။ သင့်ဗီဒီယိုများပေါ်တွင် မှတ်ချက်ပေးသော ကျပန်းရွေးချယ်ကြည့်ရှုသူ အနည်းငယ်အား အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ပါ။ ထိုသို့သောဗီဒီယိုများသည် အလွန်မျှဝေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် သင့်ပရိသတ်ကို မျှဝေဖို့ အားပေးဖို့၊ သင်အမြဲလုပ်နိုင်တယ်။ YouTube ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူပါ။. များစွာသော မျှဝေမှုများ၏ ထင်ယောင်ထင်မှားရှိခြင်းမှာ လူများကို သဘာဝကျကျ အကြောင်းအရာကို မျှဝေရန် အမြဲတမ်း တွန်းအားပေးနေပါသည်။
Trolling သည် အဖြစ်များသော ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး YouTube မှ ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိပါ။ အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာမှာ အဆိုးမြင်စိတ်ကို ရှောင်ရှားပြီး troll အားလုံးကို လျစ်လျူရှုရန်ဖြစ်သည်။ trolls တွေနဲ့ အချည်းနှီးစကားတွေပြောမနေဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ အမုန်းပွားစေသောမှတ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ခြင်းသည် ချန်နယ်အတွက် နာမည်ဆိုးတစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Trolls များသည် အသေးအမွှားနှင့် အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အဆိုးမြင်မှတ်ချက်များသည် သင့်ချန်နယ်နှင့် ထိတွေ့လိုသည့် စစ်မှန်သော ကြည့်ရှုသူများကို မောင်းထုတ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုများနှင့် သင့်ချန်နယ်၏တိုးတက်မှုအပေါ် ဆိုးရွားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရှောင်ရှားရန်၊ မှင်စာများ၏မှတ်ချက်များကို ပိတ်ရန် သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
အခြား YouTube ချန်နယ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း။
သင့်နယ်ပယ်ရှိ လူကြိုက်များပြီး လာမည့်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများနှင့် ရင်ဘောင်တန်းကာ ၎င်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းတို့၏ချန်နယ်ကို လိုက်ကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးမှုများကို ဖွင့်ပေးသည့် ၎င်းတို့၏ ဗီဒီယိုများတွင် ဉာဏ်ကောင်း သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော မှတ်ချက်များ ချပေးပါ။ မကြာခဏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် သင့်ချန်နယ်ကို သတိပြုမိစေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင့်ဗီဒီယိုများတွင် စမတ်ကျသောမှတ်ချက်များ အပြန်အလှန်ပေးပို့ရန်နှင့် အခြားဖန်တီးသူများကိုလည်း တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဗီဒီယိုများမှတစ်ဆင့် အခြား YouTube ချန်နယ်များကိုလည်း အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်သစ္စာရှိကြည့်ရှုသူအချို့သည် သင့်အကြံပြုထားသောချန်နယ်များ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင့်ချန်နယ်အမည်ကို ဖော်ပြထားသည့် အဆိုပါ YouTube ဗီဒီယိုများတွင် မှတ်ချက်ပေးရန် သူတို့ကို အားပေးပါ။ အခြားဖန်တီးသူများသည်လည်း သင့်နှစ်သက်ရာကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီး သင့်ချန်နယ်သို့ အသွားအလာကို မောင်းနှင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ချန်နယ်၏ လက်လှမ်းမီမှုကို ကျယ်ပြန့်စေသည်။ သင်သည် အခြားအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများနှင့် ပူးပေါင်းဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ပေါင်းစပ်ကြည့်ရှုသူများနှင့်အတူ ဆွဲငင်အားရရှိစေနိုင်သည်။
သင်၏ YouTube ဗီဒီယိုများကို မှတ်ချက်ပေးရန် ကြည့်ရှုသူများကို ဆွဲဆောင်ခြင်းသည် နည်းဗျူဟာမြောက် ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။ အခြေခံနည်းဗျူဟာအနည်းငယ်သည် သင့်ကြည့်ရှုသူအခြေခံအတွက် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသောဖိုရမ်တစ်ခုဖန်တီးရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင့်ချန်နယ်၏တိုးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီလိုလျှင် YouTube ကြိုက်နှစ်သက်သည် မှတ်ချက်များနှင့် YTpals သည် သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်မှုကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ သင့်အား အသိပညာပေးရန်နှင့် သင်၏ YouTube ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို မြှင့်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သင့်အား ကူညီနိုင်ပါသည်။ YouTube ကြည့်ရှုချိန်များကို ဝယ်ယူပါ။.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သင်သည် အခမဲ့ YouTube စာရင်းသွင်းသူများကို အော်ဂဲနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်လိုပါက၊ အဘယ်ကြောင့် မလုပ်သနည်း။ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုဝယ်ယူပါ ငါတို့ဆီက? သင့်ချန်နယ်ရှိ စာရင်းသွင်းသူအများအပြားကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သင့်အကောင့်ကို ချစ်မြတ်နိုးလာမည့် အော်ဂဲနစ်စာရင်းသွင်းသူများကို စတင်ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ YTPals မှတဆင့်၊ သင်သည် အခမဲ့ YouTube မှတ်ချက်များကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်၏ YouTube ဗီဒီယိုများတွင် ကြည့်ရှုသူများကို မှတ်ချက်ပေးရန် ထိပ်တန်းနည်းလမ်း5ခု YTpals စာရေးသူများက, 25 မေလ 2022
YouTube အကြောင်းအရာ ဖန်တီးသူများသည် ကြည့်ရှုသူများ၏ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ရန် အခြား ဖန်တီးရှင် အများအပြားနှင့် ပြိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အခမဲ့ YouTube မျှဝေမှုများနှင့် အခမဲ့ YouTube မှတ်ချက်များကို ရယူရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဖန်တီးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သင်သည် သင်၏…
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် YouTube အသုံးပြုခြင်းအတွက် ထိပ်တန်း အကြံပြုချက် ၁၀
သင်သည် YouTube တွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ဖန်တီးရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုလား။ ကောင်းပြီ၊ မင်းနေရာမှန်ကိုရောက်ပြီ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အသေးအမွှားလေးတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး YouTube အကြံပြုချက် 10 ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
YouTube ၌အဘယ် B2B အမှတ်တံဆိပ်များလုပ်သင့်သနည်း။
၂၀၂၀ သည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ COVID-2020 ကူးစက်မှု၏အမျက်ဒေါသသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အထူးသဖြင့်နေထိုင်ခြင်း - အိမ်တွင်အမှာစာများအရ၎င်းတို့၏ရှပ်တာများကိုဆွဲချရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှခံစားခဲ့ရသည်။